US iyo Ruushka oo ka shiraya Ukraine - BBC News Somali
US iyo Ruushka oo ka shiraya Ukraine
30 Maarso 2014
Image caption Lavrov iyo Kerry
Wasiirada arrimaha dibada ee Maraykanka iyo Ruushka ayaa maanta ku shiraya magaalada Paris ee wadanka Faransiiska, si ay uga xaajoodaan arrinta Ukraine guud ahaan, gaar ahaanna xiisada ka taagan gobolka uu Ruushka ku darsaday dalkiisa ee Crimea.
Sida ay wararka qaar sheegayaan, xoghayaha arrimaha dibada ee Maraykanka, John Kerry, ayaa weeciyay duulimaad uu dalkiisa ugu laaban lahaa, kaddib markii uu safar kusoo kala bixiyay wadamo ka tirsan bariga dhexe, waxaana uu si toos ah u abaaray caasimada Paris.
Labada mas'uul ayaa kulmaya kaddib markii ay sidaas ku heshiiyeen madaxdooda kala ah Madaxweyne Barack Obama, iyo Madaxweyne Vladimir Putin, oo muddo saacad ah telefoonka uga wadahadalayay xaallada Ukraine.
Mr Lavrov ayaa u sheegay telefishin Ruushka laga leeyahay Sabtidii shalay, in xukuumadda Moscow aysan ku tala jirin faragalin ay ku samayso bariga Ukraine.
Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inuu kumannaan ciidan ah u diray soohdinta uu la wadaago bariga Ukraine.
Isla shalayba, waxaa dabaal deg uu ka dhacay magaala madaxda gobolka Crimea ee Simferopol, kaddib markii uu maamulka halkaasi bedelay goor sheegta oo uu la socod siiyay xilliga caasimada Moscow.
Dhanka kale, maamulka kumeel gaarka ah ee Ukraine ayaa isu diyaarinaya doorashada dalkaasi ka dhacaysa 25-ka May ee sanadkan.
Ninka horay u dheeli jiray ciyaarta feerka, haddana ah siyaasiga caanka ah, Vitaly Klitschko, ayaa tartanka madaxtinimada isaga haray Sabtidii shalay, waxaana uu shaaciyay inuu taageerayo ninka bilyooneerka ah ee ka ganacsada shukulaatada, Petro Poroshenko.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Ukraine, Yulia Tymoshenko, oo xabsiga laga soo daayay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Ukraine, Viktor Yanukovych, ayaa sheegtay in ay u tartamayso doorashada madaxtinimo ee soo socota.
Ukraine: Xal diblomaasi oo muuqda
29 Maarso 2014
Afti laga qaadayo gobolka Crimea
27 Febraayo 2014
Ruushka oo looga digay faragelin militeri